Home News RW Axmad Abiy oo Farmaajo garsiiyay fariin uu ka waday Imaaraadka!
Waxaa magaalada Addis Ababa shalay soo garay wafdi uu hogaaminyay dhaxalsugaha dalka imaaraadka Shiikh Maxamed Bin Zayid iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminyay. Imaanshada Wafdigaan ayaa waxaa ay ku soo begantay Maalin ciid ah.
Wafdiga oo addun gaarayo $3 Billion ugu deeqay dolwada Itoobiya ayaa wali ku sugan waxana la rajaynayaa in ay caawa ay ka ambabixi doonaan dalka Itoobiya. Wafdiga ayaa sugaya ka soo noqoshada RW Axmed Abiy uu ka soo noqdo Muqadishu galabta. Waxaa warar hoose oo ay heshay MOL shagayaa in fartiin uu ka waday Shiikh Maxamed uu RW Axmed u gudbiyay MD Farmaajo. Waxaana muuqata in fartiintu ahayd mid digniin iyo handadaad isugu jirta. Hadii Farmaajo aqbali waayo fartiintaasna waxaan shaki ku jirin in Sacuudiga iyo Imaaraadka oo kaalmeeysanaya Itoobiya ay dagaal siyaasadeed ku qaadi doonaan dowlada Farmaajo. Su’uusha waxa ay tahay Farmaajo ma ka tanaasulayaa Qatar? Dad badan ayaa qaba in go’aanka ka tanaasulida Qatar ay u taalo Fahad Yasin, Farmaajo-na uu talo ku lahaynin.
RW Axmed, maxuu galabta kula noqon doonaa Maxmed Bin Zayed? Dib ayaan wixi soo kordho idinkuugu sii gudbin doonaa.
Previous articleWarmurtiyeedkii ka soo boxay kulankii RW Ahmed Abiy iyo Farmaajo
Next articleSacuudiga iyo Imaaraadka oo Itoobiya ugu deeqay Lacag fara badan! Sabab?
Somalia’s NIEC blamed for corruption & undermining Puntland reconciliation efforts